हे भगवान, के देख्नुपर्यो ! यती राम्री ६ महिने छोरीलाई आफ्नै बाबुले वि,ष खुवाएर मा,रे (भिडियो हेर्नुस) – Namaste Host
हे भगवान, के देख्नुपर्यो ! यती राम्री ६ महिने छोरीलाई आफ्नै बाबुले वि,ष खुवाएर मा,रे (भिडियो हेर्नुस)
March 2, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हे भगवान, के देख्नुपर्यो ! यती राम्री ६ महिने छोरीलाई आफ्नै बाबुले वि,ष खुवाएर मा,रे (भिडियो हेर्नुस)
सरस्वतीको अनुसार ६ महिने बालिकाको ह त्या गरेर उनलाइ घरबाट निकाल्ने योजना गणेशको परिवारको थियो । योजना अनुसारनै उनको श्रीमान ससुरा र सासुले ह त्या गरेको सरस्वतीको आ रो प रहेको छ । अब प्रस्तुत छ सरस्वती र घ ट ना को सम्पुर्ण नालीबेली सरस्वतीका दाजुको मुखबाट ।
सिच्नै नसक्ने गरि एक्कासी ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य